သံဗူးများအတွက်လူမီနီယံပန်းကန် | YK လူမီနီယမ်
ဒီနေ့, လူမီနီယံလုပ်နိုင်တဲ့, သတ္တုကွန်တိန်နာထုပ်ပိုးတဲ့အဖျော်ယမကာ, ၏သမိုင်းရှိပါတယ် 61 နှစ်များ, အလွန်ရင့်ကျက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အတူ.
ပူပြင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့, ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဘီယာသို့မဟုတ် carbonated အချိုရည်ချ gulp သောအခါ, ရောင်စုံလူမီနီယံသံဗူးများတွင်အပြောင်းအလဲမရှိသောကွက်လပ်များမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိလိမ့်မည်! ဟုတ်ကဲ့, ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စွမ်းရည်နှင့်ပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအလူမီနီယမ်သံဗူးအလွိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, အရာကောင်းစွာလုပ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လာကြတယ်စက်၏မြန်နှုန်းမြင့်တံဆိပ်တုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ချောမွေ့စွာလုပ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်! ဖြည့်စွက်ကာ, အလွန်ကောင်းမွန်သောပြွန်မှုန်သည်အလူမီနီယမ်အဖုံးကိုခိုင်ခံ့စွာ crimped လုပ်နိုင်သည်, ုံသောက်တံဆိပ်ခတ်! ကျနော်တို့လူမီနီယံသံဗူးများအတွက်အလူမီနီယံအလွိုင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြစဉ်, လက်တွေ့တွင်, သံဗူးများအတွက်အသုံးပြုသောလူမီနီယံအလွိုင်းကွိုင်, အတူ9တန်ချိန်အလေးချိန်နှင့် 1.5 အကျယ်မီတာ, ထုတ်လုပ်နိုင်သည် 750,000 ဘူးခွံများ ! ဒါကသိပ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ် !
လောလောဆယ်, ရှိပါတယ် 1100, 1050, 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 5005, 5052, 5182, 5754 နှင့် 5454 အလူမီနီယံဘူးခွံများလူမီနီယံသံဗူး၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အသုံးပြုသောအလွိုင်းအဆင့်. သူတို့ထဲတွင်, အသုံးအများဆုံးမှာ 3104-h19 ဖြစ်သည်, 5182 h19, နှင့် 5052-h19 လူမီနီယံသံဗူးသတ္တုစပ်.
ပြန်လည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်